𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 2) - The Khant Digital
4. “More Than 1.1 Million New Registered WordPress Domains Every6Months”
2015 က ‌စာရင်း‌ကောက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအင်တာနက် CMS အသုံးပြုမှု Survey အရ WordPress ဟာဆိုရင် နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့6လ အတွင်းမှာကို 1.1 မီလီယံ ကျော်တဲ့ Domains များအတွက် တာ၀န်ယူပေးရပါတယ်။ WordPress ကအသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေတဲ့အပြင် Digital Marketing နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Online မှာ ရေရှည်တည်တံ့စွာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ များစွာ အထာက်အကူရစေပါတယ်။ WordPress ရဲ့ Market Share က တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်တက်လာသလို အခုဆိုရင် ကိန်းဂဏန်းအရ 1 မီလီယံကျော် နီးပါးရှိနေပါတယ်။
5. “WordPress Is Searched For 2,940,000 Times Every Month”
Keyword-analysis Tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KWFinder ကရရှိတဲ့ Data အရ ကမ္ဘာအနှံ့က လူတွေ “WordPress” ဆိုတဲ့ Keyword ဖြင့် Google Search လုပ်ခြင်းက တစ်လအတွင်းမှာကို3သန်းနီးပါး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီ Data အရ အကယ်၍ သင့် Website မှာ Long-tail Keywords ပါ၀င်မယ်ဆိုရင် Search လုပ်ကြတဲ့ ပမာဏ ဘယ်လောက်ထိပိုမြင့်နိုင်လဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
6. “WordPress Dominates Google’s SERP With 2.28 Billion Results”
Google မှာ WordPress နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Search Results များက 2.28 Billion ကျော်ပါတယ်။ သင်က WordPress Website အသစ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် Blog တစ်ခုကို စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့ Search Feature များကို ချက်ချင်းတော့မလိုအပ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Content များကို ပိုပြီး Create လုပ်လာတဲ့အခါ Users များက သင့်ရဲ့ Contents, Articles, Products များကို လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ့နိုင်ဖို့လိုလာပါတယ်။
လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်း WordPress နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်အလက်တွေကို တင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 1)
← Prev: 𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟭) Next:5New Features In WordPress 5.6 →
Copy & Paste The Following Code Snippet In Additional CSS Session....
Test your site in WordPress 5.6 As always,abig new update means loads of fixes, enhancements, and changes. Most of...
1. "WordPress Is Powering 37% Of The Web" ဒီအချက်က အနည်းငယ်တော့ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်ရော...